Andrei Stoyanov အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ မိန်းမကားအဘယ်သူနည်း။ ကလေးရှိလား ဘယ်ရုပ်ရှင်တွေမှာမင်းသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲ | လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Andrei Stoyanov အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ မိန်းမကားအဘယ်သူနည်း။ ကလေးရှိလား ဘယ်ရုပ်ရှင်တွေမှာမင်းသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲ
Andrey Stoyanov ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်မေလ ၉ ရက်နေ့တွင်ယူကရိန်းနိုင်ငံ Slavyanka (ယူကရိန်း) တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးယခုသူသည်အသက် ၄၂ နှစ်ဖြစ်သည်။
သူ၏ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာကြွယ်ဝသည်။ သူသည်ရုပ်ရှင် ၅၈ ခုတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းသားထင်ရှားတဲ့နှင့်ဆက်ဆက်ချက်ချင်းကိုသတိရ။
သူသည်အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင်သူ၏သမီးဗစ်တိုးရီးယားပေါ်လာသော်လည်းသူမကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။
ယခုသူ၏ဇနီးအယ်လီနာဘာကော့ဗ်သည်သူသည် House-2 ၏အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းသောကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်သည်။
Andrey Stoyanov ကို ၁၉၇၄ မေလ ၉ ရက် (ယူကရိန်း Slavyansk) တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကြီးထွားမှု - ၁.၉၂ ။ တစ်နှစ်သားသည်သူ၏မိခင်နှင့်မော်စကိုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူ၏ပထွေးကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ GITIS တွင်သင်ကြားခဲ့သော Mikhail Feigin နှင့်တွေ့ဆုံသောအခါသရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Elena Berkova နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။
Andrey Stoyanov - အယ်လီနာဘာကူဗာ၏ခင်ပွန်း ၅ ယောက်
အတော်လေးလူကြိုက်များပြီးဆည်းပူးခံရပြီးနောက်သရုပ်ဆောင်မင်းသား Andrei Stoyanov သည် ၄၀ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုမကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့သည်။ Little က Andryusha ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်မေလ ၉ ရက်တွင် Irkutsk မြို့၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသူကပြဇာတ်ရုံကျောင်းမှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
Stoyanov ရဲ့သရုပ်ဆောင်အလွန်ကြွယ်ဝသည်။ သူသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်းဇာတ်ကား၏ပွဲ ဦး ထွက်ကိုရုပ်ရှင်၌စတင်ခဲ့သည် ကိုးကား; Policequot ဖွင့်လှစ်;။ ဤရုပ်ရှင်ကားပြီးသည်နှင့်သူသည်ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Vasily Luchkov ၏အခန်းကဏ္offeredကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ပြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ၊ အကြီးမားဆုံးနှင့်အပြောင်မြောက်ဆုံးအခန်းကဏ္Krမှာစီးရီးတွင် Krutov ၏အခန်းကဏ္ is ဖြစ်သည် quote Policequot;.
လက်ထပ်ခဲ့သည် သူဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်သြဂုတ်လမှာ porn ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအယ်လီနာဘာကိုဗာနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ဤနည်းအားဖြင့် Andrey Stoyanov သည် porn ကြယ်ပွင့်၏ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်လာသည်။ အသစ်တီထွင်ထားသောဇနီး၏သားမှအပကလေးများမရှိသေးပါ။ တတိယမြောက်အိမ်ထောင်မှ Berkova တွင် Zhenya ဆိုသည့်သားတစ်ယောက်ရှိသည်။
ဒီနှစ်မှာပြသထားတယ် စီးရီး quote; မီးပြတိုက်၏အလင်းနှင့်အရိပ်;, Andrei ခေါင်းစဉ်အခန်းကဏ္ in အတွက်သရုပ်ဆောင်ဘယ်မှာနှင့်လမ်းဖြင့်လည်းရုပ်ရှင်ထဲတွင်အခန်းကဏ္hasကသူ Berkova နှင့်အတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကပင်အင်တာနက်တစ်ခုလုံးသည် Zolotukhin - Irina Lindt ၏မုဆိုးမနှင့်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထိုအရာသည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ Elena Birkova!
Andrey Stoyanov သည်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၄ ခုနှစ်မေလ ၉ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်ယခုအသက် ၄၀ ရှိပြီ။ အိမ်ထောင်သည်ဇနီး၏အမည်မှာအယ်လီနာဘာကာဗာဖြစ်သည်။ စကားမစပ်သူမကအိမ် - ၂ ပြပွဲမှာပါ ၀ င်ခဲ့တယ်။ သူဟာ Stoves - Shops, Bear, Hamlet, စပါးရိတ်ရာကာလပွဲမှာကခုန်ခြင်းနဲ့တခြားရုပ်ရှင်တွေစတဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။
သူသည်မေလ ၉ ရက်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်အောင်ပွဲခံသည့်နေ့၌မွေးဖွားခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကသူသည်အသက် ၄ နှစ်ပြည့်သည်။
သူ၏ဇနီးအယ်လီနာဘစ်ကိုဗာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကြိမ်ကြိမ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Dom-2 ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
Andrey Stoyanov ကို ၁၉၇၄ တွင်ယူကရိန်း၌မေလ ၉ ရက်၌မွေးဖွားခဲ့သော်လည်းသူသည်မော်စကိုတွင်အစောဆုံးကလေးဘဝမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ Andrei သည်မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်သော်လည်းသူသည်ထိုကဲ့သို့သော porn actress ၏ခင်ပွန်းနှင့် House 1974 Elena Berkova ၏ခင်ပွန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူသည်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။
ဥပမာအားဖြင့် Stoyanov သည် "မီးပြတိုက်၏အလင်းနှင့်အရိပ်";
အင်ဒရူးစတိုယာနော့ဗ်ကိုယူကရိန်းတွင် ၅၀/၀၉/၇၄ တွင်မွေးဖွားခဲ့သော်လည်းမော်စကိုတွင်တစ်နှစ်တာနေထိုင်ခဲ့သည်။ အတော်လေးလူသိများသောသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းမကြာသေးမီကလက်ထပ်ပြီးသားများမကြာမီကမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုတွင်သတိပြုမိခဲ့သော porn မင်းသမီး Elena Berkova ကိုလက်ထပ်ခြင်းကြောင့်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။
Stoyanov တွင်သမီးတစ်ယောက်ရှိသော်လည်းသူနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိပါ။ သူသည် Andrei အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
Andrei Stoyanov သည်အသက် ၄၀ ရှိပြီဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီက House2တွင်ပါ ၀ င်သူ၊ ရောမထရီထရော့ကော့ဗ်နှင့်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လိင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သို့ပြန်ရောက်လာသည့်အဲလီနာဘာကော့ဗ်နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။
Andrei Stoyanov သည်ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီအစီအစဉ်များတွင်ကစားခဲ့သည် - ယောက္ခမ၊ အပန်းဖြေစခန်းရဲ၊ ဆရာဝန်များကိစ္စ၊ ကျေးရွာ။
Andrei Stoyanov သည်ယခုအချိန်တွင်အသက် ၄၀ ရှိပြီး (မေလ ၉ ရက်၊ ၁၉၇၄) ။ Stoyanova ၏ဇနီးသည်ယခုနှစ်သြဂုတ်လ (၂၀၁၄) တွင်လူသိများလာပြီးညစ်ညမ်းသည့်မင်းသမီး Elena Berkova ။ Andrei Stoyanov တွင် Vika သမီးတ ဦး ရှိပြီးသရုပ်ဆောင်မင်းသားအသက် ၁၈ နှစ်သာရှိသေးသည်။ သူမသည်မိန်းကလေး၏မိခင်နှင့်လက်မထပ်သေးသော်လည်းသူမသမီးကိုပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ ရုပ်ရှင်များတွင်အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးအခန်းကဏ္theမှာသူရဲကောင်းဖြစ်သူ Sergey Krutov ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်တီဗီစီးရီး "Traffic Light"၊ "သေခြင်းမတိုင်မီလှပသော" တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Movie Quot; Page Quote OSAquot; နှင့် Provocateur; စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့် Stoyanov ၏ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည်အတော်လေးကြီးမားပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။ အကြောင်းမှာသူသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ ရုပ်ရှင်များတွင်စတင်ခဲ့သည်။
Andrei Stoyakov သည်ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ ကိယက်ဗ်မှလာပြီးမကြာသေးမီကမော်စကိုတွင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်မှာထင်ရှားကျော်ကြားပြီးအလားအလာကောင်းသည့်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Andrei Stoyakov သည် ၄၃ နှစ်ရှိသင့်သည်၊ အကြောင်းမှာသူသည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်မေလကိုးရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,301 စက္ကန့်ကျော် Generate ။